Qaybaha yaraanta ayaa saamayn doona iPhone 13 iyo iPad | Wararka IPhone
Qeyb yarida ayaa saameyn doonta iPhone 13 iyo iPad
Luca Maesteri, ayaa wax laga weydiiyay suurtagalnimada yaraanta sahayda ee jiilka xiga ee iPhones iyo iPads ee shirka natiijooyinka maaliyadeed ee sannadlaha ah. Maesteri, wuxuu sharraxay in Apple uu u dhego nugul yahay yaraanta sahayda iyo in waxa ugu aaminka badan ayaa ah inay ku dambayn doonto saameynta iPhone iyo gaar ahaan iPad inta lagu jiro bisha soo socota ee Sebtember.
Waxaa macquul ah in yaraanta la ogaadey inta lagu jiro rubuckan Juun ayaa ka sii weyn bisha Sebtember Maestri ayaa faallo ka bixiyay. Tani waxay ka dhigan tahay in xannibaadaha ay macquul ahaan saameyn ku yeelan karaan wax soo saarkooda waxaana la filayaa inay ku sameyn doonaan si ka ballaaran iPad-ka marka loo eego iPhone 13.
Rajooyinka Apple waa in had iyo jeer lagu xisaabtamo
Ma jiro qof ka hubin badan filashooyinka shirkadda lafteeda Waana in la ogaado faahfaahinta ku saabsan xaddiga badeecadaha la iibin karo ama la soo saari karo rubuc, Apple waa kan jawaabaha bixiya. Way cadahay in Apple ay turubkeeda ciyaareyso oo aysan muujin doonin daciifnimo, laakiin waa run in waaxda ay la il daran tahay qaybo ka kooban sababo kala duwan awgood, oo ay ka mid tahay COVID-19 oo ah faafa oo saameysa meeraha oo dhan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, aan rajeynno in iPhone 13 uusan la kulmin dib u dhac maadaama ay dhacday in la dhigo noocyada hadda jira ee iPhone 12 marka la eego qeybinta. Tim Cook laftiisa ayaa taas sharraxay waxay si adag uga shaqeynayaan inay ka fogaadaan dhibaatooyinka xagga saadka iyo saadka. Dhinaca kale, qaybo ka mid ah kuwa isticmaala silikon ayaa iyaguna la ildaran xannibaadyo. Waxaas oo dhami waxay si cad u saameynayaan dhammaan warshadaha, Apple-na way iska cadahay inay adkaan doonto laakiin aan macquul aheyn sidaa darteed waxay ku qasbayaan mashiinka inay ka fogaadaan dhibaatooyinka sida ugu macquulsan Waan arki doonaa waxa dhaca fasaxa xagaaga kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Qeyb yarida ayaa saameyn doonta iPhone 13 iyo iPad
Adeegso "Akhriso waxyaabaha" si aad iPhone-ka kuugu akhrido shaashadda